Dedica della Basilica di Santa Maria Maggiore, Santo del giorno per il 5 agosto | Ilblogdellafede
Nraranye nke Basilica nke Santa Maria Maggiore, Saint nke ubochi nke August 5
Akụkọ banyere nraranye nke Basilica nke Santa Maria Maggiore
N'etozi iwu site n'aka Pope Liberius na etiti narị afọ nke anọ, Pope Sixtus nke III wulitere ntọala Liberian n'oge na-adịghị anya ka ndị isi ọgbakọ Efesọs kwuputara utu aha ya na Meri dị ka nne nke Chukwu na 431. Biri na nne ahụ n'oge ahụ. nke Chukwu, Santa Maria Maggiore bụ ụka kachasị elu n'ụwa na-asọpụrụ Chineke site na Meri. O guzo n’elu otu ugwu asaa nke Rome, ya bụ, ndị Esquiline, ọ lanarịrị ọtụtụ mweghachi na-enweghị ụdị ya dị ka basilica ndị Rom oge ochie. Ime ya ka nwere ọdọ mmiri atọ nke kewara site n'ụdị nke oge Constantine. Mosa nke narị afọ nke ise n’elu mgbidi na-agba akaebe banyere ịdị adị ya.
Santa Maria Maggiore bụ otu n'ime ụzọ ihe anọ dị na Rome nke a maara dị ka katidral ndị Patriarchal na-echeta ebe mbụ nke .ka. San Giovanni na Laterano nọchiri anya Rome, Lee nke Peter; San Paolo fuori le mura, oche nke Alexandria, o doro anya na oche Marco na-elekọta; San Pietro, oche nke Constantinople; na St. Mary, oche nke Antiọk, ebe Meri ga-anọ ọtụtụ afọ na ndu ya.
Nkọwa akụkọ, nke akọpụtaghị tupu afọ 1000, na-enye aha ọzọ ememme a: Nwanyị Nwanyị Nke Siri. Dabere na akụkọ ahụ, otu di na nwunye Rome bara ọgaranya kwere nkwa na ha ga-enyere nne nke Chukwu Onwe ha na nkwuputa, ọ rụpụtara mmiri ọrụ ebube ga-ada na mmiri ma gwa ha ka ha rụọ ụlọ ụka ahụ. Emeela ememme a kemgbe site na ịhapụ mmiri ọmalịcha osisi pere mpe site na dome basilica ụbọchị 5th nke Ọgọstụ.
Arụmụka banyere okpukpe na ọdịdị nke Kraist dịka Chukwu na mmadụ rutere ọgbụgba ọkụ na Constantinople na mmalite narị afọ nke ise. Chakọchukwu Bishop Nestorius bidoro ikwusa ozi ọma megide aha Theotokos, "Mama nke Chukwu", na-ekwusi ike na nwanyị amaghị nwanyị bụ naanị nne nke mmadụ. Nestorius nakweere, nye iwu na site ugbu a gaa gaba na Meri ga-akpọ "nne nke Kraịst" n'anya ya. Ndị Constantinople fọrọ nke nta ka ha nupụrụ isi nkwupụta bishọp ha banyere nkwenye dị oke mkpa. Mgbe kansụl Efesọs jụrụ Nestorius, ndị kwere ekwe gawara n'okporo ámá, jiri obi ụtọ bụọ mkpu, sị: “Theotokos! Theotokos! "
← Na post gara aga Gara aga post:Ezi ofufe n'oge a: ido mmadụ nsọ
Ọzọ Post → Post ozo:Ihe ndi mmadu na enweta ego nke Vatican iji tinye uche na coronavirus